Hiran State - News: HS:- Musharaxiitii reer Hiiraan ee u tartameysay baarlamaanka cusub oo aan wali soo xulin.
HS:- Musharaxiitii reer Hiiraan ee u tartameysay baarlamaanka cusub oo aan wali soo xulin.
HS:- Magaalada Mogdishu waxa beelaha reer Hiiraan uga socda shirar kala duwan kuwaasi oo lagu soo kala xulayo gudigii ansaxin lahaa dastuurka cusub iyo waliba mudanayaashii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub.
Hadaba iyadoo aysan jirin ilaa hada xildhibaan ay gudbiyeen magaciisa beelaha Soomaliyeedna ay wali u dhiman yahiin shirar badan ayaa waxaa magaalada Mogdishu shirar kuwaasi la mid ah ugu socdaa reer Hiiraan.
Shirarkii ugu danbeeyey ee ay yeesheen jifo hoosaadyada ay ka kooban yahiin beelaha Hiiraan ayeysan waxbo ka soo bixin iyadoona loo balamay shirweyne lagu kala saari doono cidii noqoneyso mudane baarlaman.
Xildhibaan Cumar Ugaas Muumin oo maalmahii tagay olole xoogan ay isaga iyo rag kale ugu jireen sidii uu u noqon lahaa amaba xildhibaanada Cusub uga mid noqon lahaa kaambeyn maanajarka mid ka mid ah musahraxiinta reer Hiraan ayaa maanta odoyaal gaarayey 9 hortooda ka sheegay in aan wali lagu kala bixin gursigii beesha Faramage.
Arintaan ayaa timid kadib markii maanta uu mid ka mid ah odoyaasha beesha u yeeray Dr Cali Warfaa oo olole xoogan ka wada gudaha Soomaaliya kaasi oo ku yiri kaliya inuu isaga si gooyni ah ugu baahan yahay kadibna markii musharaxu goobta tagay ugu tagay Xildhibaan Cumar Ugaas iyo Avv Daahir oo ah musharax u tagaan gursigaan iyo ilaa 6 odoy oo kale kadibna waxaa hadalka qaatay xildhibaan Cumar Ugaas oo yiri gursigaan waxa u tartamaya labadan nin halkii ay dadku markii hore moodeen inuu u tartamayey hal musharax marka waa in si hoose arinta loo dhameeyo maanta oo midkood tanaasulo.
Kadibna waxaa laga codsaday Dr Cali Warfaa iyo Avv Daahir in midkood tanaasulo labaduba wey isku tanaasuli waayeen kadibna xildhibaan Cumar Ugaas ayaa goobta ka sheegay in aan wali lagu kala bixin gursigaas. hadalka xildhiban Cumar Ugaas ayaa waxaa soo dedejiyey kadib markii Dr Cali Warfaa hor dhigay odoyaashii qaladaadka ay horey u galeen iyo midka ay hada ku sii socdaan.
Avv Daahir oo dhawr isbuuc ka hor ka dhoofay dalka Ingiriiska oo islahaa xildhibaanimadan meel cidlo ah ayaad ka heleysaa maadaama iyadoo dad kale sharaxan yahiin aan loo sheegin hada wuu dareensan yahay in wax badan horey loo qalday amaba inuusan gursigaas sahal ku heleyn oo uu dhib badan ka mari doono hadii uusan isagu tanaasulin amaba ninka ay is hayaan tanasul ka imaan.
Sikastaba dhamaan shirarkii shaley iyo maanta dhex maray beelaha Hiiraan amaba jifo hoosaadyada wax natiijo ah kama soo bixin dhamaana musharaxiinta waxaa lagu kala saarayaa shirweyn oo ay ka soo qeyb galaan dhamaan odoyaasha dhan halka ay hada iyagu jifo hoosaadyo isku arkaan.
Labadan Musharax ayaa waxey ku kala socdaan labo waji oo aad u kala duwan
Avv Daahir waxaa fikirkaan ku dhaliyey mid ka mad ah musharaxiinta reer Hiiraan ee u tartamaya xilka madaxweynimada Soomaaliya hadii ay u suuroobi weyso inuu xilkaan ku guuleysto oo uu soo baxo jaanis ah in uu noqdo R/wasaare ayna dhici karto in la yiraahdo wasiirka 1aad waxuu ka imaanayaa amaba waxaa noqon karo qof ka mid ah baarlamaanka kaliya si musharaxaas booska loogu baneeyo.
Dr Cali Warfaa waa aqoonyahan waaya arag ah ilaa hada lagama hayo qof hebel ayaan u codeynayaa waxuu ololahan soo waday mudo isaagoo siyaabo kala duwan ula kulmay qeybaha kala duwan ee beesha taasi ayaa keentay in wax badan laga walwalo xildhibanimadiisa ilaa uu sida Avv Daahir loo ogyahay marka uu xildhibaan noqdo meesha uu codkiisa aadi doono iyo ujeedada laga leeyahay xildhibaanimadiisa uu isaguna cadeeyo.
Wararkii ugu danbeeyey waxey shegayaan in uusan jirin cid uu balan qaad gooyni ah siiyey Dr Cali Warfaa kaliyana hada uu ku dadaalayo sidii uu uga mid noqon lahaa mudanayaasha reer Hiiraan u meteli doono baarlamaanka cusub kadibna xildhibaanadaas kala shaqeyn doono waxii maslaxad u ah dalka iyo dadka Soomaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan isagoo la tashi arintaas kala sameyn doono mudanayaasha cusub ee reer Hiiraan u imaan doono,taasi oo rag badan wal wal galisay.
Sikastaba waxaa safar deg deg ah Mogdishu ku tagi doono dhawaan mid ka mid ah musharaxiinta reer Hiiraan si uu arintaan iyo arimo kale oo badan u furdaamiyo maadaama lagu dhagan yahay gaambeyn maanajarkiisii dhinaca ololaha.
· admin on July 20 2012 23:48:59 · 0 Comments · 1785 Reads ·
14,584,172 unique visits